Amanqaku ka-Rajneesh Kumar kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu URajneesh Kumar
Umthengisi wentengiso yedijithali kunye nenkohliso yokukhula, uRajneesh Kumar okwangoku uyintloko yentengiso yedijithali kwiiPimcore Global Services. IPimcore liqonga elidityanisiweyo lokudibanisa amabhaso olawulo lwedatha eyi-master (PIM / MDM), ulawulo lwamava omsebenzisi (i-CMS / UX), ulawulo lwee-asethi zedijithali (i-DAM) kunye ne-eCommerce.
Kutheni uR2B Commerce eyomeleleyo ikukuphela kwendlela eya phambili kubaThengisi kunye nabaThumeli bePost COVID-19
Lwesine, Disemba 17, 2020 Lwesine, Disemba 17, 2020 URajneesh Kumar
Ubhubhane we-COVID-19 wenze amafu okungaqiniseki kubume beshishini kwaye kukhokelele ekucinyweni kwemisebenzi yezoqoqosho. Ngenxa yoko, amashishini kunokwenzeka ukuba abone utshintsho lweparadigm kumxokelelwano wokubonelela, iimodeli zokusebenza, indlela yokuziphatha kwabathengi, kunye nokuthengwa kunye neendlela zokuthengisa. Kubalulekile ukuthatha amanyathelo asebenzayo ukubeka ishishini lakho kwindawo ekhuselekileyo nokukhawulezisa inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Ukomelela kweshishini kungahamba indlela ende ekuziqhelaniseni nezinto ezingalindelekanga